ကရင်၏ မူလ ဇာစ်မြစ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဒေါက်တာမြင့်သိန်း (ငြိမ်းချမ်းလုလင်): “အယောင်ဆောင်ဒီမိုကရက်များ”
We urgently need an Umbrella Political Organization for all the Muslims from Myanmar »
Source: ကရင်၏ မူလ ဇာစ်မြစ် by FNG on September 13, 2012
ထိုနည်းတူ ကရင်လူမျိုးများ၏ မူလဇစ်မြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးမျိုး ယူဆ ပြောဆိုကြပေသည်။ အချို့က ကရင်လူမျိုးများသည် တိဘက်လူမျိုး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ အချို့က ကရင်လူမျိုးများသည် တရုတ်ပြည် အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ ဆင်းသက်လာကြသော လူမျိုးတမျိုးဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။
အချို့ကလည်း ကရင်လူမျိုး သည် ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဟုခေါ်သော ဤနိုင်ငံ၏ မူလ တိုင်းရင်းသား (aborigine) ဟု
အာရှတိုက် အလယ်ပိုင်း၌ ကရင်အခေါ်အဝေါ်နှင့် တွေ့ရသော အင်းအိုင်များလည်း ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ –
ဆောင်းပါး မူရင်း ဖော်ပြထား သည့် နေရာ
Tags: Burma, Ian Morrison, Karen, Karen people, Mon people, Red Karen, Shan States, Sumer
This entry was posted on September 13, 2012 at 8:00 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.